Manchester City oo dalabkeeda ugu horeeyay ka gudbisay xidiga kooxda Napoli Jorginho – Gool FM
Manchester City oo dalabkeeda ugu horeeyay ka gudbisay xidiga kooxda Napoli Jorginho
(Man City) 26 Maajo 2018. Sida lagu daabacay wargeyska “Mezzogiorno” oo si aad ah ugu dhowr kooxda Napoli Manchester City ayaa ka gudbisay dalbkeeda ugu horeeyay xidiga khadka dhexe Jorginho.
Pep Guardiola ayaa doonaya in xidiga khadka dhexe kooxda Napoli uu ka dhigto badalka Fernandinho ee kooxda Manchester City, wuxuuna u arkaa inuu yahay badalka saxda ah ee laacibka reer Brazil xili ciyaareedka soo aadan.
Ciyaaryahanka reer Brazil ee Shakhtar Donetsk Fred ayaa ahaa bar-tilmaameedka Guardiola, isagoo ka gudbiyay dalab uu ku doonayo xidigan, laakiin maamulka kooxda reer Ukraine ayaa iska soo diiday dalabka ninka reer Spain.
Sidaasi darteed Guardiola ayaa isha ku haya Jorginho, xili kooxda Manchester United ay go’aansatay ay in ay dhakeeda raacdo u gasho Ciyaaryahanka reer Brazil ee Shakhtar Donetsk Fred, sidaas darteed Manchester City fursad weyn u heysata inay lasoo saxiixato Jorginho.
Napoli ayaa laga yaabaa inay iska diido dalabka Manchester City oo aan la shaacin iyadoo kooxda reer Talyaani dalabkeedu yahay 52 milyan ginni inay ku fasaxdo xidigeedan reer Brazil suuqa xagaaga ee soo aadan.
Zidane oo caawa hawada ku cunaya laacib kaan iyo weerarka BBC oo ....!
Maxay Real Madrid uga dhignaan doontaa haddii ay caawa ku guuleysato Champions League markii 3-aad oo Xiriir ah????